【 သရျောစာ 】 “ မွနျမာ့ဝေါဟာရခတျေပွောငျးတျောလှနျရေး ” | Opinion Leaders
【 သရျောစာ 】 “ မွနျမာ့ဝေါဟာရခတျေပွောငျးတျောလှနျရေး ”
မွနျမာ့ဝေါဟာရခတျေပွောငျးတျောလှနျရေးကွီးကား ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံတှငျ အမှနျတကယျ အရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးဖွငျ့ ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ။
ထူးခွားဆနျးပွားသော မွနျမာစကားလုံးအမြိုးမြိုး ၊ မွနျမာစာအမြိုးမြိုး၊ မွညျသံစှဲ အလင်ျကာအမြိုး မြိုးသညျ ထိုတျောလှနျရေးကွီးနှငျ့အတူ တဈနတေ့ဈမြိုး မရိုးအောငျ ပျေါပေါကျလကျြရှိသညျ။
ထိုတျောလှနျရေးကွီး၏ မွဈဖြားခံရာကား Social Network ဟု ချေါသော လူမှုကှနျယကျ Facebook ကွီးပငျ ။
ယနေ့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံတှငျ လူမှုကှနျယကျ Facebook လူကွီး ၊ လူငယျ ၊ လူလတျ အရှယျမရှေး ၊ လူတနျးစားမရှေးခြိတျဆကျအသုံးပွုနသေော လူမှုကှနျယကျ ၊ မှားသညျမှနျသညျအပထား သတငျး အခကျြအလကျမြား အလငျြမွနျဆုံးစီးဆငျးရာ ကှနျယကျကွီးတဈခုပငျဖွဈသညျ ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ Facebook သုံးစှဲသူလူဦးရမြေားပွားလာသညျနှငျ့အမြှ ဖဘှေ့တျတှငျသုံးစှဲသော မွနျမာ ဝေါဟာရ စာလုံးပေါငျးအသုံးအနှုနျးမြားကလညျး ထူးထှအေံ့ရာသျောဖွဈလာနသေညျ။ အှနျလိုငျး သုံးစှဲလမေ့ရှိသူတဈဦးအနဖွေငျ့ တဈစုံတဈယောကျ၏ Facebook Wall ပျေါသို့ ဝငျကွညျ့ မိသညျဆိုပါက သူတဈသကျတှငျတဈခါမှ မမွငျဘူးသော မွနျမာစာလုံးပေါငျးနညျးအသဈမြား ကွောငျ့ မကျြစိလညျသှားမညျမှာ ဧကနျပငျ ။
အနှီဖဘှေ့တျရှိ မွနျမာစကားလုံးအသုံးနှုနျးတို့ကား မညျသညျ့ မွနျမာအဘိဓာနျ ၊ မညျသညျ့ စာလုံးပေါငျး သတျပုံကမျြးနှငျ့ မညျသညျ့ပေါရဏ စကားစာအုပျတို့တှငျမြှ ရှာဖှေ မတှနေို့ငျသညျ့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုနျး မြားဖွဈနသေညျကို တှရေ့လိမျမညျ ။
“ဟြောငျ့ မငျးက ဘူဒုနျး” “သှားလူဇိုး” “ပွောပစြေ”။ ဂယျပွောတာပါ’။ ‘ကှကိုနပေဇြေ’
‘ ဥယေး သှားဝူးယားငငျ’ ‘ နီကို မှမှ’ ‘အာ့ ကြျော ပွောတာဟုတျဝူးနျော’ ‘သမြားဖာသမြား ဘိုလုပျလုပျပေါ့’
စသညျ့ စကားလုံးမြား ဖဘှေ့တျတှငျ တဖွညျးဖွညျးတှငျကယျြလာနသေညျ့ စကားလုံးအခြို့ဖွဈသညျ ။
၂၀၀၆ တှငျ ကြှနျတျော G talk နှငျ့ Facebook ကို စတငျသုံးစှဲခဲ့သညျ ။အဲဒီတုနျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံ အှနျလိုငျးသုံးစှဲသူအနညျ;ငယျကွားတှငျ မွနျးဂလိဈ ဟုချေါသော မွနျမာအသံထှကျကို အင်ျဂလိပျစာလုံးပေါငျးဖွငျ့ပွောသညျမြားခတျေစားခဲ့သညျ ။
ဥပမာ - နကေောငျး လား ကို “nay kaung lar” ဟု ပွောကွသညျ ။နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျး ဖဘှေ့တျသုံးစှဲသူ မြားပွားလာပွီးနောကျ ခုနတုနျးက ဟကေ့ောငျကို ဟြောငျ့ တို့ ကြှနျတျော ကို ကြျော တို့ဆိုသညျ့ စာလုံးပေါငျးမြားပျေါလာသညျ ။
မွနျမာစာဖွငျ့ ကြောငျးပွီးသညျ့ ကြှနျတျောပငျ အနှီစကားလုံးတှပေျေါလာကစက တျောတျော အူလညျလညျ ဖွဈသှားဖူးသညျ။
နောကျမှ စကားလုံးအဓိပ်ပါယျကို မနညျးစပျဆကျစဉျးစားယူရသညျ ။
အဘယျပညာရှိသကောငျ့သားကမြား တီထှငျလိုကျသညျမသိ ။ အံသွဖို့ကောငျးလစှေ ။
ခကျသညျက ဖဘှေ့တျ သညျ အီဘိုလာတို့ ဆားဈH1N2. ရောဂါတို့ထကျ ကူးစကျနှုနျးမွနျသညျ့ ကိစ်စဖွဈသညျ။
တဈယောကျက ကြှနျတျော ဟု ပွောမညျ့စကားကို ကြျော ဟု စာလုံးပေါငျးလိုကျလငျြ ကနျြသညျ့ လူတှကေ ပါ ကြျော ကြျော ဖွဈကုနျသညျ ။
နောကျဆုံး နာမညျကြျောအနုပညာရှငျအခြို့နှငျ့ ဖဘှေ့တျတှငျ လူသိမြားသော ဆယျလီဘရဈတီ အခြို့က လညျး အနီစကားလုံးကို လိုကျသုံးကွသညျ ။
ဒီလိုနှငျ့ပဲ မွနျမာ့ဝေါဟာရ အသဈအဆနျးတှေ ထပျထှကျလာပွီး နောကျလူငယျတှကေလညျး ဒီလိုပဲ ရေးကွပေါငျးကွတော့မညျမှာ ဧကနျမခြှတျ ။
ခတျေအဆကျဆကျ ဘနျးစကားတှေ ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျကတညျးက ကွားဖူး..ဖတျဖူးခဲ့သညျ ။
ဥပမာ - အမြိုးသမီးငယျမြားကို မဒ ၊ မွာ ၊ စျော စသညျဖွငျ့ လူငယျသုံးဘနျးစကားမြား အဆငျ့ဆငျ့
ပွောငျးလဲ ခဲ့သညျကို ကြှနျတျောတို့ စာဖတျရငျးက သိခဲ့ရသညျ ။
သို့သျော အဆိုပါ ဘနျးစကားမြားကား ဘနျးစကား သာဖွဈသညျ မွနျမာ့ဝေါဟာရတှငျ အီဒီယမျအဆငျ့သို့ ပငျမရောကျ ။
အခွားနိုငျငံမြားမှ ဖဘှေ့တျသုံးစှဲသူမြားတှငျလညျး သုံးစှဲသူအခငျြးခငျြးကွား ပိုမိုလငျြမွနျလှယျကူသော စာလုံးပေါငျးအတိုပေါငျးနညျးတဈခြို့သုံးစှဲသညျကို တှဖေူ့းသညျ ။
ဥပမာ - To =2, How Are You ကို How R U
မွနျမာနိုငျငံရှိ ဖဘှေ့တျလောကတှငျတော့ ထိုထူးဆနျးသညျ့ မွနျမာစာလုံးပေါငျးနညျးမြား ၊ စာရေးဟနျ မြား တဈနတေ့ဈခွားပိုမို ဆနျးသဈစှာ ထှကျပျေါလာသညျ ။
ဖဘှေ့တျတှငျ ဒခြိ ဒခြိ ဆိုသညျ့ မွညျသံစှဲအလင်ျကာသညျလညျး လူသုံးမြားသညျကို တှရေ့သညျ ။
မိမိနှငျ့ခငျမငျရငျးနီးသူတဈယောကျအား နောကျပွောငျသညျ့ ပို့ဈတဈခုရေးတငျပွီးနောကျ စာကွောငျး နောကျဆုံးတှငျ ဒခြိ ဒခြိ ဟူသော မွညျသံစှဲအလင်ျကာကို ထညျ့သညျမှာ ဖဘှေ့တျသုံးစှဲသူမြားအကွား ရပေနျးစားခဲ့သညျ ။
အဲဒီတုနျးက ကြှနျတျောကပဲ အ လှနျးတာလားမသိ ။
ဒခြိ ဒခြိ အဓိပ်ပါယျကို သူငယျခငျြးတှကေို လိုကျမေးကွညျ့မိသညျ ။
သူငယျခငျြးတဈယောကျက ဒခြိ ဒခြိ ဆိုသညျမှာ မွနျမာရုပျရှငျဇာတျကားမြားရှိ ဖိုကျတငျခနျးမြား တှငျ နောကျခံသုံးသညျ့အသံ ဒခြိ ဒခြိ ကို ယူထားခွငျးဖွဈကွောငျးရှငျးပွမှ သိရတော့သညျ ။
နောကျပိုငျးတော့ ဒခြိဒခြိ အပွငျ ပို့ဈတငျသညျ့ စာသားအဆုံးတှငျ ငိငိ ၊ ကှိကှိ ၊ တို့ ဘာတို့ စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးခတျေစားလာသညျကို တှရေ့သညျ ။
ကြှနျတျောကတော့ စကားအသဈအဆနျးပျေါလာတိုငျး ပါးစပျအဟောငျးသားဖွငျ့ အဓိပ်ပါယျလိုကျဖျော ကွညျ့နသေညျသာ..။
တဈခြို့ကား အဓိပ်ပါယျပေါကျပွီး တဈခြို့စကားလုံးမြားကိုကား အခုအခြိနျအထိ ဘာမှနျးမသိသေးသညျကို ဝနျခံရပမေညျ ။
နောကျထပျဖဘှေ့တျပညာရှိတို့ တီထှငျထားသော ထူးဆနျးအံဖှယျရာဓလတေ့ဈခုရှိသေးသညျ ။
ယငျးကား ယောင်ျကြားလေးအခငျြးခငျြး ခကျြဈဘောကျဈ မှ စကားပွောလြှငျ “ဟဲ့ကောငျမ..ညညျးဘာလုပျနလေဲ…ဂနျးနာမကွီး” စသညျဖွငျ့ အမြိုးသမီးခငျြးပွောသညျ့ပုံစံဖွငျ့ ပွောသညျ့ ဓလေ့။
ဘယျသူက ဘယျလိုအစပြိုးလိုကျသညျမသိ ။
တဈခြို့ လူငယျလေးမြားယောင်ျကြားခငျြးဖုနျးပွောလြှငျ ပငျ အဲဒီလိုပွောကုနျကွသညျအထိ ဖွဈကုနျ သညျ။
မိနျးကလေးအခငျြးခငျြး ဟြောငျ့ သားကွီး စသညျဖွငျ့ ချေါဝျေါသုံးစှဲကွသညျကိုလညျး တှဖေူ့းသညျ ။
နောကျဆိုလြှငျ အပွငျလောကတှငျပါ ယောင်ျကြားလေးခငျြး ဟဲကောငျမ ဘာညာချေါပွီး မိနျးကလေး တှကေ အခငျြးခငျြး ဟရောငျ မငျးက ဘာလဲ ငါက ဘာလဲ ဖွဈလာမညျလားမသိ..။
နောကျ မွနျမာ့ဂေးလောကမှ ထငျရှားသညျ့စကားမြားဖွဈသညျ့ “သူငယျထောငျ” “ဝုနျးခငျြစရာကွီး” “အကိတျ” ကှီး.. ညလေး စသညျစကားမြားလညျး သုံးစှဲမှုတှငျကယျြလာသညျ ။
ကြှနျတျောနှငျ့ရငျးနှီးသော ထိုငျဝမျနိုငျငံသူအမြိုးသမီးငယျတဈယောကျရှိသညျ ။
သူက မန်တလေးနိုငျငံခွားဘာသာတက်ကသိုလျတှငျ မွနျမာစာအဓိကကြောငျးတကျသှားပွီး ထိုငျဝမျတှငျ မွနျမာစာအကွောငျးကမျြးပွုနသေညျ့သူ ။
မွနျမာစာကို သာမနျမွနျမာတဈယောကျနီးပါးကြှမျးကငျြလှသညျ ။
လှနျခဲ့သညျ့နှဈပတျလောကျက သူ ကြှနျတေျာ့ဆီ အှနျလိုငျးမှ တဆငျ့မေးလာသညျ ။
ဖဘှေ့တျတှငျရေးထားသညျ့ မွနျမာစာကွောငျးတဈခုကို အဓိပါယျပွနျပေးပါတဲ့ ။
ဒါပမေယျ့… သူလုံးဝ နားမလညျပါတဲ့…။
“ဘှ ဆိုတာ တိုကျပှဲပဲ..အာကွောငျ့ ဟြောငျ့ဒေ..နီတို့နာတို့ ဘိုအတားအဆီးတှတှေ့ေ့ ဒခြိဒခြိ နိုငျအောငျ ကွိုစားကွမယျ..အားလုံးကို မှမှ..”
ပထမတော့ ကြှနျတျောတောငျ တရုတျစကားတှကေို ဗမာလိုရေးထားတာလို့ ထငျမိသေးသညျ ။
နောကျတော့မှ အဓိပါယျကို သခြောစိစဈပွီး သူ့ကို ဘာသာပွနျပေးရသညျ ။
သူက ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျမေးသေးသညျ
“နငျတို့ မွနျမာစာက ဘယျနှဈမြိုးရှိတာလဲတဲ့”
သူဆိုလိုတာက သူတို့ တရုတျမှာလို ကနျတုံတှေ မနျဒရငျးတှကှေဲပွားလားဆိုသညျ သဘော..။
“အေး ဟုတျတယျ ဒါက နောကျဆုံးပျေါ မွနျမာအှနျလိုငျးဘာသာစကားကိုသုံးထားတာ” လို့ ကြှနျတျောခပျတညျတညျနှငျ့ ပွနျဖိနျ့လိုကျရသညျ ။
ဒီတော့ တရုတျမက ပွနျပွောသညျ ။
“နောကျတဈခေါကျ မွနျမာပွညျပွနျလာရငျ အဲ့ဒီ မွနျမာအှနျလိုငျးဘာသာစကားအဘိဓာနျစာအုပျလေး ဝယျပေးထားစမျးပါ” တဲ့…။
ကြှနျတေျာ့မှာ ရယျရခကျ ငိုရခကျ..။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အနှီ မွနျမာ့ဝေါဟာရခတျေပွောငျးတျောလှနျရေးကွီးမှ နပွေီး ဖဘှေ့တျမွနျမာအဘိဓာနျ တဈအုပျလောကျတော့ ပျေါထှကျလာသငျ့သညျ ဟု ကြှနျတျောထငျသညျ ။
ဖဘှေ့တျပျေါမှ ဘာသာစကားတီထှငျသူ ပညာရှငျမြားအနဖွေငျ့လညျး မွနျမာအှနျလိုငျး ဘာသာစကား အဘိဓာနျစာအုပျတဈအုပျတော့ ကွိုးစားပွုစုဖို့သငျ့သညျ ။
ယခုနောကျဆုံး ဖဘှေ့တျတှငျခတျေစားနသေညျ့ စကားအရပွောရလြှငျတော့… ဒီဂြာနယျစာမကျြနှာကို ကြှနျတျောတကျလာတာက..အာ့ လာပွောတာ သာ ဖွဈပါသညျ ခငျဗြား..။
မြန်မာ့ဝေါဟာရခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးကား ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် အမှန်တကယ် အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသော မြန်မာစကားလုံးအမျိုးမျိုး ၊ မြန်မာစာအမျိုးမျိုး၊ မြည်သံစွဲ အလင်္ကာအမျိုး မျိုးသည် ထိုတော်လှန်ရေးကြီးနှင့်အတူ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးအောင် ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။
ထိုတော်လှန်ရေးကြီး၏ မြစ်ဖျားခံရာကား Social Network ဟု ခေါ်သော လူမှုကွန်ယက် Facebook ကြီးပင် ။
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် လူမှုကွန်ယက် Facebook လူကြီး ၊ လူငယ် ၊ လူလတ် အရွယ်မရွေး ၊ လူတန်းစားမရွေးချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေသော လူမှုကွန်ယက် ၊ မှားသည်မှန်သည်အပထား သတင်း အချက်အလက်များ အလျင်မြန်ဆုံးစီးဆင်းရာ ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook သုံးစွဲသူလူဦးရေများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဖေ့ဘွတ်တွင်သုံးစွဲသော မြန်မာ ဝေါဟာရ စာလုံးပေါင်းအသုံးအနှုန်းများကလည်း ထူးထွေအံ့ရာသော်ဖြစ်လာနေသည်။ အွန်လိုင်း သုံးစွဲလေ့မရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ Facebook Wall ပေါ်သို့ ဝင်ကြည့် မိသည်ဆိုပါက သူတစ်သက်တွင်တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသော မြန်မာစာလုံးပေါင်းနည်းအသစ်များ ကြောင့် မျက်စိလည်သွားမည်မှာ ဧကန်ပင် ။
အနှီဖေ့ဘွတ်ရှိ မြန်မာစကားလုံးအသုံးနှုန်းတို့ကား မည်သည့် မြန်မာအဘိဓာန် ၊ မည်သည့် စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းနှင့် မည်သည့်ပေါရဏ စကားစာအုပ်တို့တွင်မျှ ရှာဖွေ မတွေ့နိုင်သည့် ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း များဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလိမ်မည် ။
“ဟျောင့် မင်းက ဘူဒုန်း” “သွားလူဇိုး” “ပြောပျစေ”။ ဂယ်ပြောတာပါ’။ ‘ကွကိုနေပျဇေ’
‘ ဥယေး သွားဝူးယားငင်’ ‘ နီကို မွှမွှ’ ‘အာ့ ကျော် ပြောတာဟုတ်ဝူးနော်’ ‘သများဖာသများ ဘိုလုပ်လုပ်ပေါ့’
စသည့် စကားလုံးများ ဖေ့ဘွတ်တွင် တဖြည်းဖြည်းတွင်ကျယ်လာနေသည့် စကားလုံးအချို့ဖြစ်သည် ။
၂၀၀၆ တွင် ကျွန်တော် G talk နှင့် Facebook ကို စတင်သုံးစွဲခဲ့သည် ။အဲဒီတုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူအနည်;ငယ်ကြားတွင် မြန်းဂလိစ် ဟုခေါ်သော မြန်မာအသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းဖြင့်ပြောသည်များခေတ်စားခဲ့သည် ။
ဥပမာ - နေကောင်း လား ကို “nay kaung lar” ဟု ပြောကြသည် ။နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူ များပြားလာပြီးနောက် ခုနတုန်းက ဟေ့ကောင်ကို ဟျောင့် တို့ ကျွန်တော် ကို ကျော် တို့ဆိုသည့် စာလုံးပေါင်းများပေါ်လာသည် ။
မြန်မာစာဖြင့် ကျောင်းပြီးသည့် ကျွန်တော်ပင် အနှီစကားလုံးတွေပေါ်လာကစက တော်တော် အူလည်လည် ဖြစ်သွားဖူးသည်။
နောက်မှ စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်ကို မနည်းစပ်ဆက်စဉ်းစားယူရသည် ။
အဘယ်ပညာရှိသကောင့်သားကများ တီထွင်လိုက်သည်မသိ ။ အံသြဖို့ကောင်းလေစွ ။
ခက်သည်က ဖေ့ဘွတ် သည် အီဘိုလာတို့ ဆားစ်H1N2. ရောဂါတို့ထက် ကူးစက်နှုန်းမြန်သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်က ကျွန်တော် ဟု ပြောမည့်စကားကို ကျော် ဟု စာလုံးပေါင်းလိုက်လျင် ကျန်သည့် လူတွေက ပါ ကျော် ကျော် ဖြစ်ကုန်သည် ။
နောက်ဆုံး နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်အချို့နှင့် ဖေ့ဘွတ်တွင် လူသိများသော ဆယ်လီဘရစ်တီ အချို့က လည်း အနီစကားလုံးကို လိုက်သုံးကြသည် ။
ဒီလိုနှင့်ပဲ မြန်မာ့ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်းတွေ ထပ်ထွက်လာပြီး နောက်လူငယ်တွေကလည်း ဒီလိုပဲ ရေးကြပေါင်းကြတော့မည်မှာ ဧကန်မချွတ် ။
ခေတ်အဆက်ဆက် ဘန်းစကားတွေ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူး..ဖတ်ဖူးခဲ့သည် ။
ဥပမာ - အမျိုးသမီးငယ်များကို မဒ ၊ မြာ ၊ စော် စသည်ဖြင့် လူငယ်သုံးဘန်းစကားများ အဆင့်ဆင့်
ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်ရင်းက သိခဲ့ရသည် ။
သို့သော် အဆိုပါ ဘန်းစကားများကား ဘန်းစကား သာဖြစ်သည် မြန်မာ့ဝေါဟာရတွင် အီဒီယမ်အဆင့်သို့ ပင်မရောက် ။
အခြားနိုင်ငံများမှ ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူများတွင်လည်း သုံးစွဲသူအချင်းချင်းကြား ပိုမိုလျင်မြန်လွယ်ကူသော စာလုံးပေါင်းအတိုပေါင်းနည်းတစ်ချို့သုံးစွဲသည်ကို တွေ့ဖူးသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖေ့ဘွတ်လောကတွင်တော့ ထိုထူးဆန်းသည့် မြန်မာစာလုံးပေါင်းနည်းများ ၊ စာရေးဟန် များ တစ်နေ့တစ်ခြားပိုမို ဆန်းသစ်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည် ။
ဖေ့ဘွတ်တွင် ဒချိ ဒချိ ဆိုသည့် မြည်သံစွဲအလင်္ကာသည်လည်း လူသုံးများသည်ကို တွေ့ရသည် ။
မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနီးသူတစ်ယောက်အား နောက်ပြောင်သည့် ပို့စ်တစ်ခုရေးတင်ပြီးနောက် စာကြောင်း နောက်ဆုံးတွင် ဒချိ ဒချိ ဟူသော မြည်သံစွဲအလင်္ကာကို ထည့်သည်မှာ ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူများအကြား ရေပန်းစားခဲ့သည် ။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ကပဲ အ လွန်းတာလားမသိ ။
ဒချိ ဒချိ အဓိပ္ပါယ်ကို သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်မေးကြည့်မိသည် ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒချိ ဒချိ ဆိုသည်မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများရှိ ဖိုက်တင်ခန်းများ တွင် နောက်ခံသုံးသည့်အသံ ဒချိ ဒချိ ကို ယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြမှ သိရတော့သည် ။
နောက်ပိုင်းတော့ ဒချိဒချိ အပြင် ပို့စ်တင်သည့် စာသားအဆုံးတွင် ငိငိ ၊ ကွိကွိ ၊ တို့ ဘာတို့ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေတ်စားလာသည်ကို တွေ့ရသည် ။
ကျွန်တော်ကတော့ စကားအသစ်အဆန်းပေါ်လာတိုင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်လိုက်ဖော် ကြည့်နေသည်သာ..။
တစ်ချို့ကား အဓိပ္ပါယ်ပေါက်ပြီး တစ်ချို့စကားလုံးများကိုကား အခုအချိန်အထိ ဘာမှန်းမသိသေးသည်ကို ဝန်ခံရပေမည် ။
နောက်ထပ်ဖေ့ဘွတ်ပညာရှိတို့ တီထွင်ထားသော ထူးဆန်းအံဖွယ်ရာဓလေ့တစ်ခုရှိသေးသည် ။
ယင်းကား ယောင်္ကျားလေးအချင်းချင်း ချက်စ်ဘောက်စ် မှ စကားပြောလျှင် “ဟဲ့ကောင်မ..ညည်းဘာလုပ်နေလဲ…ဂန်းနာမကြီး” စသည်ဖြင့် အမျိုးသမီးချင်းပြောသည့်ပုံစံဖြင့် ပြောသည့် ဓလေ့။
ဘယ်သူက ဘယ်လိုအစပျိုးလိုက်သည်မသိ ။
တစ်ချို့ လူငယ်လေးများယောင်္ကျားချင်းဖုန်းပြောလျှင် ပင် အဲဒီလိုပြောကုန်ကြသည်အထိ ဖြစ်ကုန် သည်။
မိန်းကလေးအချင်းချင်း ဟျောင့် သားကြီး စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသည်ကိုလည်း တွေ့ဖူးသည် ။
နောက်ဆိုလျှင် အပြင်လောကတွင်ပါ ယောင်္ကျားလေးချင်း ဟဲကောင်မ ဘာညာခေါ်ပြီး မိန်းကလေး တွေက အချင်းချင်း ဟရောင် မင်းက ဘာလဲ ငါက ဘာလဲ ဖြစ်လာမည်လားမသိ..။
နောက် မြန်မာ့ဂေးလောကမှ ထင်ရှားသည့်စကားများဖြစ်သည့် “သူငယ်ထောင်” “ဝုန်းချင်စရာကြီး” “အကိတ်” ကွီး.. ညလေး စသည်စကားများလည်း သုံးစွဲမှုတွင်ကျယ်လာသည် ။
ကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးသော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ရှိသည် ။
သူက မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာအဓိကကျောင်းတက်သွားပြီး ထိုင်ဝမ်တွင် မြန်မာစာအကြောင်းကျမ်းပြုနေသည့်သူ ။
မြန်မာစာကို သာမန်မြန်မာတစ်ယောက်နီးပါးကျွမ်းကျင်လှသည် ။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်လောက်က သူ ကျွန်တော့်ဆီ အွန်လိုင်းမှ တဆင့်မေးလာသည် ။
ဖေ့ဘွတ်တွင်ရေးထားသည့် မြန်မာစာကြောင်းတစ်ခုကို အဓိပါယ်ပြန်ပေးပါတဲ့ ။
ဒါပေမယ့်… သူလုံးဝ နားမလည်ပါတဲ့…။
“ဘွ ဆိုတာ တိုက်ပွဲပဲ..အာကြောင့် ဟျောင့်ဒေ..နီတို့နာတို့ ဘိုအတားအဆီးတွေ့တွေ့ ဒချိဒချိ နိုင်အောင် ကြိုစားကြမယ်..အားလုံးကို မွမွ..”
ပထမတော့ ကျွန်တော်တောင် တရုတ်စကားတွေကို ဗမာလိုရေးထားတာလို့ ထင်မိသေးသည် ။
နောက်တော့မှ အဓိပါယ်ကို သေချာစိစစ်ပြီး သူ့ကို ဘာသာပြန်ပေးရသည် ။
သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်မေးသေးသည်
“နင်တို့ မြန်မာစာက ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတာလဲတဲ့”
သူဆိုလိုတာက သူတို့ တရုတ်မှာလို ကန်တုံတွေ မန်ဒရင်းတွေကွဲပြားလားဆိုသည် သဘော..။
“အေး ဟုတ်တယ် ဒါက နောက်ဆုံးပေါ် မြန်မာအွန်လိုင်းဘာသာစကားကိုသုံးထားတာ” လို့ ကျွန်တော်ခပ်တည်တည်နှင့် ပြန်ဖိန့်လိုက်ရသည် ။
ဒီတော့ တရုတ်မက ပြန်ပြောသည် ။
“နောက်တစ်ခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် အဲ့ဒီ မြန်မာအွန်လိုင်းဘာသာစကားအဘိဓာန်စာအုပ်လေး ဝယ်ပေးထားစမ်းပါ” တဲ့…။
ကျွန်တော့်မှာ ရယ်ရခက် ငိုရခက်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနှီ မြန်မာ့ဝေါဟာရခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကြီးမှ နေပြီး ဖေ့ဘွတ်မြန်မာအဘိဓာန် တစ်အုပ်လောက်တော့ ပေါ်ထွက်လာသင့်သည် ဟု ကျွန်တော်ထင်သည် ။
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှ ဘာသာစကားတီထွင်သူ ပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်း မြန်မာအွန်လိုင်း ဘာသာစကား အဘိဓာန်စာအုပ်တစ်အုပ်တော့ ကြိုးစားပြုစုဖို့သင့်သည် ။
ယခုနောက်ဆုံး ဖေ့ဘွတ်တွင်ခေတ်စားနေသည့် စကားအရပြောရလျှင်တော့… ဒီဂျာနယ်စာမျက်နှာကို ကျွန်တော်တက်လာတာက..အာ့ လာပြောတာ သာ ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား..။
【 သရျောစာ 】လျောဘီမြားနှငျ့ ရောငိုခွငျး
【 သရျောစာ 】၀နျကွီးခြုပျဖွဈခငျြသော တူမောငျအကောငျးစားလေးသို့ ဦးလေးဗွိမှ ပေးစာ